आखिर डक्टरहरुले बाच्दैन भनेको, हाथ खुट्टा नभएको बच्चा ४ महीना को भयो!! पढनुहोस -
आखिर डक्टरहरुले बाच्दैन भनेको, हाथ खुट्टा नभएको बच्चा ४ महीना को भयो!! पढनुहोस
फोटो फिचर विचार/ब्लग समाचार
२०७५, २ फाल्गुन बिहीबार ०३:१० February 14, 2019 clickonLeaveaComment on आखिर डक्टरहरुले बाच्दैन भनेको, हाथ खुट्टा नभएको बच्चा ४ महीना को भयो!! पढनुहोस
संसारमा बेला बेलामा अनौठा खालका घटनाहरु हुने गर्दछन जसको उत्तर कसै संग हुदैन, तर ती घटनाहरु यस्ता हुने गर्दछन की मानिषहरु चकित पर्नु बाहेक अरु केही रहदैन। यस्तै खालको घटना हालै मात्र अमेरिकाको साउथ क्यारोलिनामा बसने एक जना बच्चाले ड्क्टरहरुको कुरा र निर्णयलाई गलत साबित गरेका छन। उक्त बच्चा हाथ र खुट्टा कै जन्मिएको थियो र बाचन पनी सफल भयो। तर उक्त बच्चा जन्मिनु भन्दा पहिला डक्टहरुले भनेका थिए कि जन्म हुने बित्तिकै बच्चाको मृत्‍यु हुनसक्दछ।
२४ बर्ष कि जस्मीन सेल्फ जब ५ महिना पेट बाट थियिन त्यती खेर नै उनलाई आफ्नो हुने बच्चा को बारेमा थाहा पाईसकेकी थियिन। उक्त पेटमा भएको बच्चा यस्तो रोग बाट पीड़ित थियो कि जस्ले गर्दा उस्को हात र खुट्टाको बिकाश हुन सकिने थिएन। प्रेग्नेंसीको बेला थाहा पाईसकेको थियो कि बच्चा को अनुहार, मुटु र अन्य अंगहरुमा पनी निकै समस्या रहेको थियो। उक्त रोग संसारमा केही केही बच्चा हरुमा मात्र देखिने गर्दछ जसलाई टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम भनिन्छ।
जब डक्टरहरुले उक्त बच्चाको बारेमा जानकारी थाहा पाए उनीहरुले जस्मीनलाई उक्त बच्चालाई खसाउनका लागी सल्लाह दिएका थिए तर जस्मीन र उनका श्रीमानले बच्चालाई जन्माउने निर्णय गरीसकेका थिए। २९वौ हफ्तामा बच्चाको जन्म पनी भयो। जन्मिदा उक्त बच्चाको तौल एक किलो मात्र थियो।
एउटा अन्तर्बार्तामा जस्मीनले भनिन कि उक्त निर्णय लिदा उनलाई धेरै अफ्ट्यारो भएको थियो कि बच्चालाई जन्माउने या खसाउने। डीएनएमा जेनेटिकको समस्याले गर्दा बच्चा हरुमा यो रोग हुने गर्दछ। यस रोगबाट ग्रसित भएका बच्चा हरुको यात जन्मिनु भन्दा अघाढी या जन्मेलगत्तै मृत्‍यु हुने गर्दछ।
सुरुवाती समयमा जस्मीनले उक्त जानकारी थाहा पाएपछी बच्चालाई खसाउनका लागी बुकिंग समेत गरीसकेकी थीइन , तर अन्तिम समयमा आएर उनले बच्चा लाई बचाउने निर्णय गरिन। अहिले उक्त बच्चा ४ महीना को भैइसकेको छ।
किन मानिसहरु सुतदा उनी हरुको मुखबाट रयाल चुहिने गर्दछ ?
सामाजिक सञ्जालमा को दुरुपयोग गरी, मनपरी नचाहिने लेखेमा उक्त ब्यक्ती या सन्स्था लाई अर्थिक जरिवाना र जेल सजाय हुने
द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर छैन : कृष्णप्रसाद सिटौला
२०७५, ५ मंसिर बुधबार १५:२३ November 21, 2018 clickon
सुन्दा साधाहरण लागन सक्छ तर यदी भिटामिन डी को कमि भयो भने यी समस्या हुन सक्छन, पढनुहोस
२०७५, ८ फाल्गुन बुधबार ०४:१६ February 20, 2019 clickon
तातोपानीमा नुहाउन देउवा सँगै पौडेलको डुबुल्की
२०७५, २५ फाल्गुन शनिबार १५:०५ March 9, 2019 clickon